I-china ephathekayo ngokukhawuleza ye-gan yohlobo c iadaptha usb itshaja PD 18W ukwenziwa kunye nefektri Staba Umbane
Iphathekayo ngokukhawuleza gan uhlobo c iadaptha yodonga usb itshaja PD 18W
1. Ubume obuncinci bokukhanya okulinganayo kubungakanani bepokotho
2. Uyilo lwepini olushukumayo nolusongekayo olugqibeleleyo lokuhamba kunye nohambo
3.Ukugcina amandla okukhawulezisa ukonga ukuya kuthi ga kwi-50% yexesha
YOPHANDO NGOKU Khuphela njengePDF
*Ishaja PD 18W Iinkcukacha zeNkcazo
Le tshaja icwecwe le-18W PD ehambisa umbane nge-USB kuthetha ukutshaja ngokukhawuleza kwezixhobo zakho. Le tshaja yodonga lwe-USB ehamba ngobuchule yenzelwe ukuhambisa amaxesha ama-5 amandla eeshaja eziqhelekileyo kwizixhobo ezi-2 ngaxeshanye.
Ifaka uguquko lwamva nje kubuchwephesha bokutshaja ngesantya esiphezulu, ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB-C kunye nokutshaja okuguqukayo okukhawulezayo, le tshaja inye kuphela oyifunayo ukuze unike amandla izixhobo zakho zangoku kwaye uhlale phambi kwegophe lazo naziphi na izinto zombane ezizayo. Omabini la mazibuko anokuhambisa ukuya kuthi ga kwi-18W yolawulo lwamandla ombane aphezulu ukuya kuyo yonke into ukusuka kwii-smartphones kunye neepilisi ukuya kwiilaptops ze-USB-C ezilambile ngamandla njenge-12-intshi iMacbook. Ixhasa ukubiza ngokukhawuleza kwe-iPhone ukubiza i-iPhone 8 okanye kamva ukusuka kwi-zero ukuya kwi-50% kwimizuzu engama-30 ngentambo ebandakanywayo, kunye nezinye izixhobo kwisantya esifanelekileyo.
Injongo eyenzelwe ukuba ibe lula-ukuhamba, le tshaja ye-USB PD ilinganayo ngokulula ingena nakweyiphi na imeko ekhaya okanye xa uphumile. Le tshaja icwecwe ihleli tyaba eludongeni ukuze ilingane ngokulula emva kwefanitshala okanye kwiindawo ekulula ukufikelela kuzo. Ikwanobungakanani obulunge ngokwaneleyo ukuze ilingane epokothweni okanye engxoweni, oko kuthetha ukuba uya kuba nakho ukufikelela kwityala elikhawulezayo naphi na apho uya khona. Ishaja ekhawulezayo yePD ngokhuseleko olukhuselekileyo noluthembekileyo lokuthintela i-overvoltage, i-overcurrent, i-overheat kunye ne-short circuit.
Itshaja ye-PD eludongeni ngokuhambelana okuphezulu kunye nokuguquguquka, isisombululo sokutshaja kwisinye esikwaziyo ukuxhasa zonke izixhobo ezinamandla ze-USB (A / C) ezinje ngeefowuni kunye neetafile ukuze zisebenze ngokuzimeleyo okanye ngaxeshanye. Ishaja yodonga lwe-USB enoyilo oluhlengahlengisiweyo lweplagi ikuvumela ukuba unqande ukuvimba ezinye iindawo zokuphuma kunye nokubekwa kwakhona kwizibuko le-USB A / C ukuze ibekwe ngokulula intambo eqhagamshelwe- ngakumbi iluncedo xa usebenzisa umtya wombane okanye umkhuseli wokunyuka kunye neendawo ezininzi. Ishaja yedonga le-USB PD kunye nokuhanjiswa kwamandla okrelekrele kwezixhobo.
*Itshaja yeWall 18W Parameter
Lobukhulu: 52 * 25 * 45mm
I-USB-C: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A (Max 18W)
I-USB-A: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A (Max 18W)
I-USB-A + C: 5V / 3A (Max 15W)
Ukuhanjiswa kwamandla okukhawulezayo kwitshaja yeWall Wall
Nika zonke iifowuni kunye neetafile (kubandakanya i-iPhone kunye ne-iPad) ukukhawulezisa amandla okukhawulezisa, ngokuhanjiswa kwamandla kubonelela ngesantya esiphezulu.
Ukuhambelana kunye nokuGuquguquka kweshaja yeAdapter ye-USB
Isisombululo sokutshaja ngababini esinakho ukuxhasa zonke izixhobo ezinamandla ze-USBC kunye ne-USBA ezinje nge-iPhone, i-Samsung kunye nezinye izixhobo ze-USBC zisebenza ngokuzimeleyo okanye ngaxeshanye.
Ishaja ekhuselekileyo neThembekileyo yeFowuni ePhathwayo
Itekhnoloji yamva nje ikhuthaza ukusebenza ngokukuko kunye nokuphucula ukusasaza ubushushu okukhusela izixhobo ekuchaseni ngoku okugqithileyo, ubushushu kunye nokutshaja.
Isixhobo seAdapter yeshaja ephathekayo kunye neFoldable
Thatha intlawulo yakho naphina ngobungakanani obunobungakanani bepokotho kunye neplagi esongekayo, eyona nto iceke kakhulu kunye neeprongs ezisongelayo ziqinisekisa ukubanakho okuphezulu naphi na apho uya khona.
Egqithileyo Udonga olutsha olunamazibuko amatsha olukhawulezayo lokutshaja usb itshaja PD30W
Okulandelayo: I-SVR-172 Series (0.5kVA-5kVA) Uhlobo lokuDlulisa iVoltage Stabilizers ngomboniso oBala